Rai’sul wasaaraha Ciraaq Oo Is-casilay. – Heemaal News Network
Ra’iisul Wasaarihii dalka Ciraaq Caadil Cabdul Mahdi ayaa ku dhawaaqay inuu xilkii iska Casilay.
War qoraal ah oo kasoo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaare Caadil ayaa waxaa lagu shaaciyay inuu xilkii iska Casilay, kadib todobaadyo Ciraaq ay dhaceen Dibad-baxyo rabshado watay.
Sidoo kale is casilaada Caadil ayaa timid, kadib markii wadaadka shiicada Ciraaq uu si kulul u Cambaareeray in awood loo adeegsaday Dibad-baxayaal Careysan oo kasoo horjeeday Xukuumadii Caadil, waxuuna ku baaqay in deg deg loo dhiso dawlad cusub.
Bayaanka ka soo baxay xafiiska rai’sul wasaaraha ayaa lagu sheegay in iscasilaadiisa uu u gudbin doono baarlamaanka si ay u soo dhisaan dowlad cusub, inkastoo aan bayaanka rai’sul wasaaraha lagu sheegin waqtiga uu iscasilaadiisa gudbin doono.
Baarlamaanka Ciraaq ayaa lagu wadaa inuu Axada kulan deg deg ah ka yeesho rabshadahan, ay ku dhindeen dad gaaraya 400 oo qof tan iyo markii ay bishii October bilaabmeen iyadoo dadka reer Ciraaq ee dibadbaxa dhigaya ay dalbanayeen in shaqooyiin loo abuuro islamarkana la soo afjaro musuqmaasuqa baahsan ee dalkaasi ka jira, waxayna ay sidoo kale cabasho ka muujiyeen adeegyada dowlada oo ay sheegeen in ay liitaan.
Xoghayaha guud ee Qaramada midoobey Antonio Guterres ayaa sheegay in uu aad uga walaacsan yahay wararka sheegaya in dibadbaxayaasha rasaas loo adeegsaday .
“Dhex Ayaan U Noqonaya Xisbiyadda…” Cabdirashiid Riyo-raac Oo Ka Hadlay Xilka Loo Doortay.